सोलुमा विमान दुर्घटना- को-पाइलटसहित ३ को निधन (भिडियोसहित)
काठमाडौं । पछिलो समय निक्कै चर्चित र विवादित रहेको पब्जी खेललाई नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । पछिल्लो समय बालबालिका, किशोर किशोरी लगायतले बढी मात्रामा यो खेल खेल्ने गरेको र समाजमा आत्महत्या जस्ता घटना समेत हुन थालेपछि सरकारले खेल प्रतिबन्ध गरेको हो । केन्द्रिय प्रहरी ब्यूरोको अनुरोधमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले...
उनी नै हुन् इथियोपिया विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने नेपाली चेली
काठमाडौं । इथियोपियमा आइतबार भएको विमान दुर्घटनामा एक जना नेपाली चेलीले पनि ज्यान गुमाएकी छिन् । गोरखा नगरपालिका–१० छेवेटार घर भएकी २८ वर्षीया एकता अधिकारीको विमान दुर्घटनामा ज्यान गएको हो । उनी आठ महिना अघि मात्र इथियोपिया स्थित राष्ट्रयसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रममा ’पोस्टिङ’ भएकी थिइन् । उनलाई परिवारका सदस्यले बिहे...
यी हुन् ओली सरकारका ११ महिनाका २१ महत्वपूर्ण काम
काठमाडौं । फागुन ३ गते २०७४ मा गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकाले ११ महिना पूरा गरेको छ । यो अवधिमा सरकारको प्रशंसाभन्दा आलोचना धेरै भयो । तर धेरै विषयमा आलोचित सरकारले दीर्घकालीन महत्वका केही काम पनि गरेकाे छ । सरकारले पुराना बेथिति भत्काउँदै केही नवीन कामको प्रयास गरेको...
खोटाङ असोज–७, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोईरालाले नेकपाको दुई तिहाईको सरकारले माखो नमार्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार खोटाङको दिक्तेलमा आयोजित कांग्रेसको दोश्रो चरणको राष्ट्रिय जनजागरण कार्यक्रम समापन तथा बिरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री कोईरालाले वर्तमान सरकारले आफै विकासको कुनै पनि योजना तर्जुमा गर्न नसकेको बताउनुभएको हो । कोईरालाले वर्तमान सरकार...
देश विदेशका मुख्य खबर अबदेखि हाम्रोखोटाङ डटकममा
खोटाङ २६ साउन खोटाङका समाचार सूचना, जानकारी तथा गतिविधि देश विदेशमा रहेका सबै नेपालीसामु पुर्याउने उद्देश्यले २०१२ मे देखि नियमित सञ्चालनमा रहेको हाम्रो खोटाङ डटकमले अबदेखि देश विदेशका मुख्य मुख्य खबरहरु समेत सम्प्रेषण तथा प्रकाशन गर्ने भएको छ । यसअघि खोटाङ र खोटाङेसँग सम्बन्धित गतिवधि, सूचना तथा समाचार मात्र पस्कदै आएको...
एनसेलबाट तीन महिनाभित्र कर उठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेल खरिद–बिक्रीको लाभकर तीन महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म एनसेलको लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति रोक्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ । गत २३ माघमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित कर असुली गर्न परमादेशमार्फत दिएको आदेशको सर्वोच्चले मंगलबार पूर्णपाठ सर्वाजनिक...
काठमाडौं १८ फागुन । हेलि दुर्घटनाबाट पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलगायत ७ जनाको ज्यान गएको दुर्घटना ओभानो हुन नपाउँदै फेरि जिप दुर्घटनाबाट ११ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ । दार्चुला सदरमुकाम खलंगा बजारबाट दुहुँ गाउँपालिकाको हिकिला तर्फ जाँदै गरेको म १ ज २८० नम्बरको जीप राताकाठा भन्ने स्थानमा शुक्रबार राति करिब ८...
काठमाडौं १२ पुस । महाभूकम्प २०७२ ले भत्काएको ९ तले धराहराको पुननिर्माण आज (१२ पुस) देखि औपचारिक रुपमा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धराहरा पुन निर्माणको शिलान्यास गरेका हुन् । भूकम्पलबाट भत्किएको चार वर्षपछि भिमसेन थापाको पालामा बनेको धरहराको पुननिर्माणको काम थालिएको हो । विसं १९९० सालको...
मन्त्रीको कुटाई खाएका सचिवले भने, ‘घुस खाएको पैसा तिर्नपर्छ भन्दा नमानेपछि चड्कन हान्नुभयो ।’ (भिडियो प्रमाणसहित)
मन्त्रीको कुटाई खाएका सचिवले भने, 'घुस खाएको पैसा तिर्नपर्छ भन्दा नमानेपछि चड्कन हान्नुभयो ।’ (भिडियो प्रमाणसहित)
लुट्न सके लुट गितलाई लिएर संसदमै पुरस्कार घोषणा र चर्काचर्की (भिडियो)
काठमाडौं ७ फागुन । सर्वत्र चर्चा विवादमा रहेको लुट्न सके लुट नामक पशुपति शर्माको गितबाट व्यवस्थापिका संसद पनि अछुतो रहन सकेन । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकको शून्य समयमा कांग्रेस सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले गितलाई लिएर सरकारको कटाक्ष गरिहाले । त्यति मात्र होइन, उनले दुई तिहाईको सरकारले जनताको बोलि बोलिएको...